P57 Hoodia အား ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Tha Ra Phi
ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) 18-04-2018
♡ ♡ P57 Hoodia (အဆီကျ ဗိုက်​ချပ်ဆေး ) ♡ ♡
✔ ✔ တစ်ပတ်ကို၃ပေါင်အနည်းဆုံးကျတဲ့...... P57 Hoodia ???
❦ ❦ ဘယ်ပိန်ဆေးသောက်သောက် မပိန်းပါဘူးဆိုတဲ့.. မမများ၊ ကိုကိုများ၊ ညီမလေးများ၊ မောင်လေးများအတွက်... တစ်ပတ်အတွင်း (၃) ပေါင်အနည်းဆုံးကျတဲ့.....သဘာဝအဆီကျဆေးလေးဖြစ်ပါတယ် ☺ ☺
❦ ❦ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား အားလုံးသောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဆေးသောက်နေချိန်အတွင်း မူးတာဝေတာ ရင်တုန်တာ စတဲ့side effect တွေ မရှိပါဘူး ;-) ;-)
❦ ❦ အရမ်းအရောင်းသွက်တဲ့ပိန်ဆေးလေးပါ :-* :-*
❦ ❦ သောက်သောက်ပြီးချင်းတစ်ပတ်အတွင်းဆို သိသာ ပါပြီနော်။ဆေးဘူးတစ်ဘူးကုန်ရင်အနည်းဆုံး 10ပေါင်ကနေ အများဆုံး
25ပေါင်ထိအန္တရာယ်ကင်းစွာကျစေပါတယ် ☺ ☺
ကျလေဖြစ်ပါတယ် ♡ ♡
တစ်ဘူးမှာအလုံး (၃၀) ပါ ပါတယ်ရှင်......တစ်လစာအတိပါ ???
♡ ♡ P57 Hoodia Slimming Capsule♡ ♡
❦ ❦ Price - 7000 ks ❦ ❦
အမည်: P57 Hoodia